မြန်မာ့ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်က ဆုငွေကို လက်ခံယူရင်း အဖိုးတန် ကတိတစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ – Khit Lunge
မကြာသေးမီက ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဂုဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာဟာ မလေးရှားမှာ လေ့ကျင့်နေပြီ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယကို သွားရှောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဆီးဂိမ်းကျင်းပမယ့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်တွေ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် ဝင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ ပြိုင်ပွဲတွေလိုက်လံယှဉ်ပြိုင်ပြီးတော့ အမှတ်များစုဆောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၂ အဖြစ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို နိုင်ငံအတွက် ကြိုးစားနေသူလေးကို မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်က ပြီးခဲ့တဲ့ အီဂျစ် နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာချန်ပီယံကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဆုကြေးငွေ သိန်း ၂၀ ကို ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီချီးမြှင့်ပွဲလေးမှာ သက်ထားသူဇာဟာ အဖွဲ့ချုပ်က ဂုဏ်ယူရတဲ့ အားကစားသမားကောင်းဖြစ်အောင် ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် တန်ဖိုးရှိလိုက်သလဲနော်……. ။
ဒီလို ဆုချီးမြှင့်ပေးတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်း သက်ထားသူဇာဟာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်မှာ ယခုလိုမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
((((မြန်မာ နိုင်ငံ ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ် မှ လူကြီးမင်း များက ဂုဏ်ပြုဆုငွေ သိန်း၂၀ကို ဒီနေ့ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။🙏 ဂုဏ်ပြုဆုငွေ ချီးမြှင့် ပေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်မှ လူကြီးမင်းများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ 🙏 ရှေ့လျောက်လဲ၊ အဖွဲ့ချုပ်က ဂုဏ်ယူရတဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဂုဏ်ယူရတဲ့ အားကစားသမားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။🤩)))) ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကို ကမ္ဘာက သိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေထဲမှာ သူမလေးလည်း ပါပါတယ်။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်လေးလည်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ သူဖြစ်လို့ နောက်လာမယ့် ဘယ်ပြိုင်ပွဲမဆို အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း အားပေးလိုက်ကြရအောင်နော် ……….။
မကွာသေးမီက ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ ဂုဏျကို ကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့ သကျထားသူဇာဟာ မလေးရှားမှာ လကေ့ငျြ့နပွေီ၊ ထိုမှတဈဆငျ့ အိန်ဒိယကို သှားရှောကျယှဉျပွိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျပွီး ဆီးဂိမျးကငျြးပမယျ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံကို သှားရောကျယှဉျပွိုငျရဦးမှာဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကတော့ ၂၀၂၀ မှာ ကငျြးပမယျ့ အိုလံပဈပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ဆုတံဆိပျတှေ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးဖို့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲအတှကျ ဝငျခှငျ့ရနိုငျဖို့ ပွိုငျပှဲတှလေိုကျလံယှဉျပွိုငျပွီးတော့ အမှတျမြားစုဆောငျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ စိတျခှနျအားတှကွေောငျ့လညျး ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၆၂ အဖွဈတကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ယခုလို နိုငျငံအတှကျ ကွိုးစားနသေူလေးကို မွနျမာနိုငျငံ ကွကျတောငျအဖှဲ့ခြုပျက ပွီးခဲ့တဲ့ အီဂဈြ နိုငျငံမှာ ကမ်ဘာခနျြပီယံကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဆုကွေးငှေ သိနျး ၂၀ ကို ခြီးမွငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီခြီးမွှငျ့ပှဲလေးမှာ သကျထားသူဇာဟာ အဖှဲ့ခြုပျက ဂုဏျယူရတဲ့ အားကစားသမားကောငျးဖွဈအောငျ ဆကျကွိုးစားမယျဆိုတဲ့ ကတိပေးခဲ့ပါတယျ။ ဘယျလောကျတောငျ တနျဖိုးရှိလိုကျသလဲနျော……. ။
ဒီလို ဆုခြီးမွှငျ့ပေးတဲ့အကွောငျးလေးကိုလညျး သကျထားသူဇာဟာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့မှာ ယခုလိုမြှဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
((((မွနျမာ နိုငျငံ ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျ မှ လူကွီးမငျး မြားက ဂုဏျပွုဆုငှေ သိနျး၂၀ကို ဒီနခြေီ့းမွှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။🙏 ဂုဏျပွုဆုငှေ ခြီးမွှငျ့ ပေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျမှ လူကွီးမငျးမြားကို ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါတယျရှငျ့။ 🙏 ရှလြေ့ောကျလဲ၊ အဖှဲ့ခြုပျက ဂုဏျယူရတဲ့၊ မွနျမာနိုငျငံက ဂုဏျယူရတဲ့ အားကစားသမားကောငျးတဈယောကျ ဖွဈအောငျ ဆကျလကျကွိုးစားသှားပါ့မယျ။🤩)))) ပရိတျသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံဆိုတာကို ကမ်ဘာက သိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျသူတှထေဲမှာ သူမလေးလညျး ပါပါတယျ။ နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျလေးလညျး ဖွဈပွီး နိုငျငံအတှကျ ကွိုးစားနတေဲ့ သူဖွဈလို့ နောကျလာမယျ့ ဘယျပွိုငျပှဲမဆို အောငျမွငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး အားပေးလိုကျကွရအောငျနျော ……….။